Nezvedu - JIANGSU IMI Magetsi MOTO TECHNOLOGY CO., LTD
Jsimi ---- Kugadzira mabhasikoro emagetsi uye Kugadzira
Muna Chivabvu 2018, Kambani yakavhura fekitori yayo yekupenda, ichitora mitsara miviri yekupenda, Iyo yekupenda fekitori yakagadzirirwa kushandira yepakati uye yepamusoro-magumo enguva dzose mabhasikoro uye e-mabhasikoro kupenda, inohwina mukurumbira wakanaka pakati pevatengi vedu.
Parizvino IMI ine vashandi vanosvika makumi matanhatu. Kuti igare ichivandudza uye ichiwedzera hunyanzvi hwevashandi vayo uye mainjiniya, Kambani yakagadzira yakazara yekudzidzira kirasi.
Iine kudyara kweyechipiri kugadzirwa mutsetse, IMI kugona kwacho kwawedzera kusvika ku50,000 E-mabhasikoro pagore.
Kugadzirwa kweKambani kunosanganisira maitiro akasiyana ee-mabhasikoro. Kuti tivimbise mhando yezvigadzirwa, isu tine kutonga pane ese nhanho yekugadzira - kubva kune vhiri chivakwa, kuburikidza nezvikamu kupenda, kuenda kugungano rekupedzisira remagetsi bhasikoro pamusangano unoungana.
Iyo Kambani iri-mumba R&D, dhizaini uye zvekutenga madhipatimendi zvinopa kwakakura kuchinjika kune vatengi vedu.
Parizvino, IMI inogadzira anopfuura zviuru makumi maviri e-mabhasikoro pagore, ayo anopfuura zviuru gumi e-mabhasikoro emagetsi emagetsi emabhasikoro, ayo anoverengera Kambani pakati pevatengesi vema bhasikoro makuru mudunhu iri. Kuti uve nechokwadi chekugutsikana kwevatengi, yega e-bhasikoro inogadzirwa zvinoenderana neEuropean neUSA zviyero zvemhando.
Yedu Maitiro ndeaya: Kugadzira, Kuda, Kuvimbika, Unyanzvi
Tinogamuchira vatengi vanobva kumativi ese epasi vanotishanyira kuOEM uye ODM sevhisi.